Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): June 2009
at 6/30/2009 09:47:00 PM
လူတွေရဲ့နေ့စဉ် ဘ၀တွေမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်..။ တနေ့ချင်း စီမံမှုတွေကနေ တစ်လ၊ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်ဘ၀လုံးအ
တွက်ပါ စီမံခန့်ခွဲနေရတာပါ…။ စီမံခ
န့်ခွဲမှုမှာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရုပ်ဝထ္တုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ငွေကြေးကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲခြားစတာတွေ ရှိပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ လူစွမ်းအား အရင်းမြစ်ရဲ့ အသုံး
၀င်ပုံ ပညာလုပ်သားတွေရဲ့ အရေးပါမှုတွေ အပြင်လူဆိုတဲ့ အရင်းအနှီး တစ်ရပ်ဆိုတဲ့ အရေးပါမှုကို လက်ခံလာကြတဲ့အတွက် လူကို
စီမံခန့်ခွဲမှုက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အောင်မြင်ရေး သော့ချက်များ ဖြစ်လာပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲတော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး စဉ်စားကြတာက ကက်ပီတယ် အရင်းအနှီးကိုပါ။ ပြီးတော့အချိန်၊ နည်းပညာ ၊ သတင်း၊ ပြင်ပ အချက်အလက်တွေ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်မယ့် အမှုကိစ္စအတွက် ဆက်စပ်တည်ရှိမယ့် အရာတွေအပေါ် သက်ရောက်မှု၊ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း၊ အကျိုးရလာဒ် စတာတွေ တွက်ချက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အများစုက စီမံကိန်းတွေ လုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လူကို စီမံခန့်ခွဲဖို့တော့ မေ့လျော့တတ်ကြပါတယ် လုပ်ငန်းအတွက်
A ga Michael Jacson si mat sai i?
at 6/26/2009 09:18:00 PM
Moi Ngai Naw Kaji ai ten mu ai mura hpunsau Ya dai ni Malaysia Kaw bai wa mu hkrup
at 6/25/2009 10:16:00 PM
ya ngai hu gawng Bungli galaw taw nga ai seng makau kaw shani shana dai mura hpunsau dut ai ni hte arau rai nga ai
World Refugee Day kaw shang lawm
at 6/20/2009 06:26:00 PM
SAW SHAGA AI MAJAW WORLD REFUGEE DAY KAW SHANG LAWM SAI.
Shana daw 1:00pm hta Chinese Assembly hall Kualalumpur kaw Myen mung dan na du sa ai Myubaw sang ni yawng ahkum ara rai shang lawm ai hpe mu lu ai,NGO's hte UNHCR kaw nna sa n gun jaw hpaji jaw ai hku re.
Malaysia du Taiyin tar (Ethnic) ni woi awn ai hta Jinghpaw wunpawng myu sha ni mung ndai zawn shang lawm nga ma ai.
Singapore JLHashana shabra laika.
at 6/19/2009 06:40:00 PM
Ndau shana shabra ai lam
* Htung Hking Bu Hpun Sumli arung arai rai nga ai JinghpawWunpawng myu sha niaHking Hku ManMaw Hking Num Hking Hku hte La Hking Hku Man manga5set hpra hpe Singapore JLH fund tam ai hku nna Shap sha ai lam galaw nga ga ai . Hking Hku 1 set sha shap ai rai yang S$15 rai nna,5Set yawng galang ta shap ai rai jang gaw S$50 hte shap ya nga ai lam ndau shana dat ai. Htung hking Bu Hpun shap mayu ai ni Contact : HP 91057209 Shy Galau Htu Shan, JLH KunHting
* Buga shara shagu de nna dut shabra na matu, shagun dat ai Jinghpaw Yu ngwi shayi shadang niaCD/VCD ni hpe, JLH kaw nna dut shabra nga ga ai. Jinghpaw Yu gwi Sumtsaw mahkawn hte htung Hking myu sharawt mahkawn ni hpe madat mayu ai ni JLH de matut mahkai wa marit
*Jinghpaw Laika sharin ai lamang galaw sa wa na lam
* Kabu hpa lam langai mi gaw Jinghpaw Laika atsawm n chye hti n chye ka ai niamatu gade nna yang Jinghpaw laili laika Htung Hking Hpung JLH kaw nna Jinghpaw laika sharin ya ai lam ni galaw sa wa na re majaw Jinghpaw Laika sharin mayu ai ni JLH de Mying Jahpan sa jaw magang mai sai lam ndau shana dat ai.
* Htung Hking Hpaji Jaw Lamang ni galaw sa wa ai lam
* Laili Laika hkaw tsun hpawng lamang galaw let htung hking hpaji jaw ai lahkam htawt sa wa na. Hkaw tsun hpawng nhtoi hpe Singapore National Day (August 8, 2009) hta galaw sa wa lu na matu JLH kaw nna Hkyen lajang nga ai lam tau hkrau ndau shana shabra dat ai.
* JLH kaw nna Sinpraw Singni Journal hpe shata masum hta galang matut manoi shapraw mat wa na lam nga ai majaw Tsawra hkung ga ai Jinghpaw Wunpawng myu sha ni kadai rai tim laika ngau hpe HpaJi masa / Tsi mawan / Ningmu / Hkam sha lam/ Sakse hkam /mau mwi / shiga Hot new ni hte cartoon zawn re ai laika ngau ni hpe JLH de ka jaw na matu grai ra sharawng nga ai lam n dau shana dat ai.
Singapore JLH Main Member ni hte Contact Number
1.Slg. Maran Naw Di , Ningbaw Hp: 91808465
2.Shd. Joseph Lahpai Zau Awng , Ningbaw Malai Hp: 91660015
3.Shd Mahka Brang Ja , Ningbaw Malai HP: 91468004
3.Slg. Tangbau Awng Di , Amu Madu Hp: 83710042
4.Shd. Kareng Htoi Shawng , Amu Madu Malai Hp: 96323584
5.Shd. Nbyen Dan Hkung Awng , Amu Madu Malai Hp: 84123150
6.Shy. Galau Htu Shan , Kunhting HP: 91057209
Singapore JLH de email hte matut mahkai mayu jang
ndai kaw mung shana dat ya sai lam chye lu ai
Shara shagu shani shagu lam shagu sadi nga ra ai
at 6/18/2009 11:36:00 AM
Ndai Laman Malaysia du Jinghpaw Wunpawng myu sha ni hte Myen mungdan masha yawng gaw Magam bungli nlu nna Bung li tam hkawm ai ni grai law nga ai,
Ningrai Bung li tam nga ai ni hpeehkau e,hkrietsa baeNang bung li naw tam taw i,,sa sa aw ra de naw gan sa ga,Hpaga Gum hpraw lu lam nga ai nga nna woi mat mat re ni nga mai.
Hugawng yu ngwi
at 6/15/2009 05:20:00 PM
သဖော်သေဖက် ဆိုပြီးပေါင်းလာခဲ့တဲ့ B.E.D.C ဆိုတဲ့စရိုက်လေးမျိုးနဲ့အတွဲရှာ
at 6/13/2009 09:40:00 PM
Jamung DanaBlog na BEDC hpe ra sha dik ai majaw bang dat sai
”ကဲ…B.E.D.C ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုအရင်ပြောပါအုံး” ဆိုတော့ ”ဟုတ်ပြီငါရှင်းပြမယ်
B ဆိုတာ Boss ဖြစ်ရမယ်။
E ဆိုတာ Education ရှိရမယ်။
D ဆိုတာ Dollar ရှိရမယ်။
C ဆိုတာ Character ကောင်းရမယ် တဲ့။
Embassador ( dat kasa ni tai mu ) Mung ga Dr.Winni Zan Hta Sin
at 6/11/2009 02:39:00 PM
Dai hpawt Hkying 4:00 am ram hta Malaysia kaw nna Jinghpaw hting gaw nkau myi USA de n gaw htawt mat wa sai.
Dai hta Hugawng hte arau nga ai nta na Ah chyu Zau raw mung lawm nga ai,
Zau rawashakram poi Kyu hpyi Chyeju shakawn hpawng hta sara Num Dr.Winni zan HtaaKarai mung ga gaw matsing laHpa ga kaba ni lawm nga ai.
Ja chyum mung ga hte lakap nna Nan hte gaw Madu yesu hkristu du ai dat kasa ni tai ra ai ,Hta n -ga nna myu/Mungdanamatu Embassador,Dinghkuamatu,Hkristuamatu dat kasa kaja ni tai mu ' nga nna maigan du myu sha ni yawng hpe num htet ga,shaman ga tsun dat ai hku re.Grau nna Malaysia kawn rawt hkawm sa mat wa ai kanau/kana/nuwa myit su ni gaw ndai Karaialaksan shaman chye ju hte pru hkawm sa lu ai hpe myit dum let,Embassador (datkasa) kaja nan tai ra ai re hpe myit dum nga ga law.yak jam jau ai hpe sha myit ru nga na malai grau kaja ai lamamatu myit ru sum ru let shakut nga ga law.
Embassador ngua ai gaw :
India singpho hte myu hkum hkra nga ai shara ni (Tawang, Darung,Dayun gaw hugawng dung hte ni ma ai)
Arunacha ginra gaw miwa (china) ni hpyi taw ai shara mung rai nga ai
India Jinghpaw niamanau
Email kaw na forward ni re ai
at 6/07/2009 06:13:00 PM
Email အဟက်ခံရတယ်ဆိုတာဟာ များသောအားဖြင့် ဟောဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ social engineering ဆိုတဲ့ အယုံသွင်းပြီး password ကိုယူသွားတာ
၂။ cookies အခိုးခံရတာ
၃။ key logger လိုဟာမျိုးနဲ့ ကိုယ်ရိုက်ထားသမျှတွေထဲကနေ password ကိုသိသွားတာ
ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကြုံကြရတာဟာ အမှတ်(၁)အမျိုးအစားကများပါတယ်။Gmail team ကလိုလို၊ တခြား ယုံကြည်ရတဲ့ Site တစ်ခုခုက လိုလိုနဲ့စာတွေပို့ပြီး အယုံသွင်းတတ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ ပိုပြီးခံရကြပါတယ်။ ပြီးတော့ လူ့လောဘကို အသာလေးဆွပေးလိုက်တဲ့ စာမျိုးတွေလည်း လာတတ်ပါသေးတယ်။
တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ password ကိုသိချင်ရင် သူပို့လိုက်တဲ့ အထူးပရိုဂရမ်ကိုသုံးကြည့်ဖို့ပေါ့လေ။
လူတိုင်းဟာ သူများရဲ့ အတွင်းရေးကို သိချင်ကြသူတွေချည်းပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီအချိန်မှာ သတိလွတ်သွားပြီး သူတောင်းတဲ့အတိုင်း ကိုယ့် password ကို ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ပြီးရင် တစ်ဖက်က စာပြန်လာတတ်ပါတယ်။
မင်းသိချင်တာအတွက် အလုပ်လုပ်နေဆဲမို့လို့ ခဏစောင့်ပါ ဘာညာပေါ့လေ။
အဲဒါကတော့ auto responder လုပ်ထားလို့ ပြန်ရောက်လာတဲ့စာပါပဲ။ ကိုယ့်မေး(လ်) နဲ့ passwordကတော့ သူ့ဆီရောက်သွားပါပြီ။ ကြုံဖူးရင်ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီတော့ကာ အဲဒီလို စာမျိုးတွေကို ဘယ်တော့မှ မယုံပါနဲ့။
ဒီလိုလုပ်လို့ သူများ password ကို ဘယ်လိုမှ မသိရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ဖက်က mail serverထောင်ထားတဲ့သူတွေကလဲ သူငယ်နှပ်စားလေးတွေမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့ဒီလောက်တောင် အ, ရင် ကုန်သွားတာကြာပြီပေါ့။
အမှတ်(၂) အမျိုးအစားကတော့ ခင်ဗျားတို့လောလောဆယ် အီးမေး(လ်)ကဲ့သို့သော login name နဲ့password သုံးရတဲ့
ဆိုက်မျိုးတစ်ခုခုကို ၀င်နေချိန်မှာ အဲဒီ အချက်အလက်တွေကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ browser က ယာယီဖိုင်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ cookies လေးတွေအဖြစ်
စက်ထဲမှာ သိမ်းထားပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကို တစ်ဖက်ဆာဗာကနေ java code, php code လို scriptလေးသုံးပြီး ယူလိုက်လို့ရပါတယ်။
ပြီးရင် သူ့ဆာဗာတစ်နေရာမှာ သိမ်းထားလိုက်မှာပေါ့လေ။ နောက်တော့မှ အဲဒီ cookies တွေကို သူ့browser ထဲကို import လုပ်လိုက်ရင်
ခုနက ခင်ဗျား login ၀င်ထားတဲ့ အနေအထားမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပြီး ခင်ဗျားရဲ့ မေး(လ်)ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
More+++Ndai kaw dip dat u====
HugawngaEmail kaw shang wa ai laika
at 6/07/2009 05:46:00 PM
၂၀၀၉ တွင်လိုက်နာရမည့် အချက် (၁၀) ချက်
(၅) စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကို ကျွမ်းကျင်စေရန် လက်တွေ့လေ့ကျင့်လုပ်ကိုင်ပါ
(၆)မိမိနောက်ကွယ်ကို သစ္စာရှိစွာ ကြည့်ရှုဂရုစိုက်ပေးသော လက်တွဲဖော်ကို အားကိုးပါ
(၉) သင်၏အလုပ်ရှင်သူဌေးရှေ့တွင် အမြဲပြုံးနေပါ
(၁၀) မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါ
Hugawngadai daw buga de sadu Gawan hkawm ai dak kasu jawng ma ni hpe chye ju dum ai
at 6/03/2009 10:51:00 PM
Myu tsaw myit sharawt ram ma ni yawng hpe Ngai hugawng Baujaw(Hkung ga jaw) dat nngai law.
Moi Ngai Naw Kaji ai ten mu ai mura hpunsau Ya dai...
သဖော်သေဖက် ဆိုပြီးပေါင်းလာခဲ့တဲ့ B.E.D.C ဆိုတဲ့စရ...
Embassador ( dat kasa ni tai mu ) Mung ga Dr.Winni...
India singpho hte myu hkum hkra nga ai shara ni (T...
Hugawngadai daw buga de sadu Gawan hkawm ai dak ...